လျောက်လွှာတစ်ခု ပြင်ဆင်ရေးသားခြင်း -
Posted on December 24, 2018 January 9, 2019 Author Wynee Myanmar	Comment(0)
အလုပ်၊ ကျောင်း၊ ပညာသင်ဆု၊ ဘယ်အမျိုးအစားအတွက်မဆို ဒီနည်းလေးတွေက အသုံးဝင်မှာပါ…
အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ယောင်းဟာလည်း အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ပါဝင်ဖို့ လျှောက်လွှာတင်စရာတွေ ကြုံတွေ့လာဦးမှာပါ။ အလုပ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းဝင်ခွင့် ရဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆုကြေးငွေ ရရှိဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းတွေကြောင့် လျှောက်လွှာ တင်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းအတွက် တကယ်ကို အသုံးဝင်မယ့် အခြေခံအချက်လေးတွေကို ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီအချက်တွေက ယောင်းကို ကိုယ်စားပြုမယ့် လျှောက်လွှာရေးသားဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေချည်းပါပဲ။
၁။ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ကိုယ့်စွမ်းရည်နဲ့ တစ်ထပ်တည်း ကျနေပါစေ။
စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ် ဒါမှမဟုတ် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေးမယ်ဆိုရင် မရေးခင်မှာ ရှုထောင့်ကို ကြိုတင်စဉ်းစားကြရသလိုပါပဲ။ လျှောက်လွှာတင်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို အရင်စဉ်းစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်တယ်ဆိုရင် ယောင်းက ဘာကြောင့် ဝင်ခွင့်ရသင့်သလဲ ဒါမှမဟုတ် စကော်လာ (ပညာတော်သင်ဆု) ကို ဘာကြောင့် ယောင်းကို ပေးသင့်သလဲ စတဲ့ အချက်တွေကို အရင် တွက်ချက်ပါ။
လျှောက်လွှာက အများကြားမှာ ထင်းနေစေဖို့အတွက် သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေး၊ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ယောင်းမှာ ပြည့်စုံနေပြီလား။ ပြောမယ်ဆို သက်သေပြစရာ အဖြစ်တွေ ရှိနေပြီလားပေါ့နော်.. ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို လှလှပပ ထုတ်သုံးပြပါ။ ဒီအချက်တွေကို လျှောက်လွှာထဲမှာ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်အောင် သုံးပြီး ကိုယ်က ဒါတွေနဲ့ တကယ်ထိုက်တန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ဖော်ပြပါ။
Related Article >>> အလုပ်လျှောက်လွှာကို ထင်ပေါ်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ?
၂။ ကိုယ့်ရဲ့ ခွန်အား၊ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်တွေကို ထင်းလင်းနေအောင် ပြပါ။
လျှောက်လွှာစရေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဖော်ပြဖို့ စဉ်းစားရမယ့် အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ အစီအစဉ်တစ်ခုခုအတွက် လျှောက်လွှာတင်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ပညာသင်ဆုတွေအတွက် လျှောက်လွှာတင်တဲ့အခါမှာ လျှောက်လွှာကို ဖတ်ရှုတဲ့သူတွေက အကောင်းဆုံးနဲ့ အထူးချွန်ဆုံးတွေကို ရွေးချယ်ကြည့်တတ်တဲ့အပြင် အသင့်တော်ဆုံးကိုလည်း ရှာဖွေကြည့်ရှုတတ်ကြပါသေးတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်တွေကို ဥပမာအမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ယောင်းက တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေကို ရှာဖွေမယ့် အစီအစဉ်မှာ ပါဖို့ လျှောက်လွှာတင်မယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းကျောင်းတက်တုန်းက ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကို တီထွင်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ဖြစ်၊ ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ဖြစ် ထည့်သွင်းသင့်တဲ့အပြင် မကြာသေးခင်က အသစ်အဆန်းတွေကို ရှာဖွေရင်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ အဖြေကို ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်း ဖော်ပြလို့ ရပါတယ်။
၃။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိစစ်သူ အနေအထားမှာ နေပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါ။
အကောင်းဆုံး လျှောက်လွှာကို ရေးသားနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ရေးတဲ့ စာစီစာကုံးကို ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲဆိုတာ အချိန်ခဏယူပြီး စဉ်းစားပါ။ တကယ်လို့များ လျှောက်လွှာက လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေတုန်းက တစ်ခုခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို မေးထားတယ် ဆိုပါစို့.. ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့အတွက် ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ယောင်းဘယ်လို တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်၊ တွေ့ခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်၊ ယောင်းရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုတာတွေကို စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို ဘယ်လို ကျော်လွှားခဲ့လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အတန်းပြီးချိန်မှာ ယောင်းကို အနိုင်ကျင့်တဲ့သူကို ကိုယ်တိုင် ဘယ်လို တုံ့ပြန်ခဲ့လဲဆိုတာမျိုး သွားဖြေလို့ မရပါဘူး။ ဒီဥပမာက စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုကို ယောင်းဘယ်လို ကျော်လွှားခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြနေပေမဲ့လည်း မေးမြန်းသူဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ယောင်းရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယောင်းဟာ ဆုံးဖြတ်ချက် အားနည်းတဲ့သူတစ်ယောက်၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းကို အားပေးတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ ယူဆသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ စာစီစာကုံးတွေကတစ်ဆင့် ဒါမှမဟုတ် ဥပမာတွေကတစ်ဆင့် အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲပြီး မကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ မြင်သွားနိုင်တာကို ကြိုစဉ်းစားထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အမှားအမှန်ကို ပြန်စိစစ်ပါ။
လျှောက်လွှာမတင်သေးခင်မှာ ယောင်းရဲ့ စာစီစာကုံးတစ်ခုလုံးကို သေချာ ပြန်ဖတ်ပြီး အမှားတွေ ပြင်ပါ။ စစ်တဲ့အခါလည်း မူရင်းမေးခွန်းကို ပြန်ကြည့်ဦးနော်.. ဒါ့အပြင် ယောင်းရဲ့ အဖြေတွေက လုံလောက်မှုရှိလားဆိုတာ ပြန်စစ်ပါဦး။ အကောင်းဆုံးကတော့ ယောင်းရေးထားတဲ့ စာစီစာကုံးကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖတ်ခိုင်းပြီး ယောင်းဖြေထားတာဟာ မူရင်းမေးခွန်းနဲ့ ကိုက်လား၊ မကိုက်လား ပြောခိုင်းကြည့်ပါ။ ဆိုလိုတာက ဖတ်ရင်းနဲ့ မူရင်းမေးခွန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ဒီလိုတွေ စစ်ဆေးပြီးရင်တော့ သဒ္ဒါအထားသို၊ စာလုံးပေါင်း အမှားအမှန် စသဖြင့် အမှားအယွင်းမရှိအောင် ပြန်လည် စိစစ်ပါ။ ဒီအတွက် ပေးချင်တဲ့ အကြံကတော့ ရေးထားတဲ့ စာစီစာကုံးကို ပုံနှိပ်ထုတ်ယူပြီး စာရွက်ပေါ်မှာ အမှားရှာတာက ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ရှာဖွေတာထက် ပိုပြီး လွယ်ကူပါတယ်။
Related Article >>> Fellowship ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ?
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ အလုပ်ထက် အပြောက ပိုပြီးလွယ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ယောင်းလျှောက်မယ့် အစီအစဉ် ဒါမှမဟုတ် ပညာသင်ဆုအတွက် ယောင်းရေးထားတဲ့ စာစီစာကုံးက ယောင်းအကြောင်း အစစ်အမှန်ဖြစ်ဖို့ အရေးပါပါတယ်။ လျှောက်လွှာကို ဖတ်မယ့်သူတွေက ယောင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အနေအထားကို သိချင်ကြတာပါ။ ဒါမှပဲ ယောင်းရဲ့ လျှောက်ထားချက်နဲ့ ယောင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပေါ့.. ဆိုတော့ ယောင်းရဲ့ အကြောင်း၊ ယောင်းရဲ့ အားသာချက်ကို ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြပါ။ ဒါ့အပြင် ယောင်းက ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာကို ဖတ်ရှုစစ်ဆေးတဲ့သူတွေ သိအောင် ဖော်ပြရေးသားပါ။
အလုပျ၊ ကြောငျး၊ ပညာသငျဆု၊ ဘယျအမြိုးအစားအတှကျမဆို ဒီနညျးလေးတှကေ အသုံးဝငျမှာပါ…
အပွိုငျအဆိုငျမြားတဲ့ ဒီနခေ့တျေကွီးမှာ ယောငျးဟာလညျး အစီအစဉျတဈခုမှာ ပါဝငျဖို့ လြှောကျလှာတငျစရာတှေ ကွုံတှလေ့ာဦးမှာပါ။ အလုပျအတှကျပဲဖွဈဖွဈ၊ ကြောငျးဝငျခှငျ့ ရဖို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ငှကွေေးဆိုငျရာ ဆုကွေးငှေ ရရှိဖို့ပဲ ဖွဈဖွဈ အမြိုးမြိုးသော အကွောငျးတှကွေောငျ့ လြှောကျလှာ တငျရတော့မယျဆိုရငျတော့ ယောငျးအတှကျ တကယျကို အသုံးဝငျမယျ့ အခွခေံအခကျြလေးတှကေို ဒီမှာ ကွညျ့လိုကျပါ။ ဒီအခကျြတှကေ ယောငျးကို ကိုယျစားပွုမယျ့ လြှောကျလှာရေးသားဖို့အတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အခကျြတှခေညျြးပါပဲ။
၁။ ကိုယျရေးထားတဲ့ အကွောငျးအရာနဲ့ ကိုယျ့စှမျးရညျနဲ့ တဈထပျတညျး ကနြပေါစေ။
စာစီစာကုံးတဈပုဒျ ဒါမှမဟုတျ ဆောငျးပါးတဈပုဒျ ရေးမယျဆိုရငျ မရေးခငျမှာ ရှုထောငျ့ကို ကွိုတငျစဉျးစားကွရသလိုပါပဲ။ လြှောကျလှာတငျတော့မယျဆိုရငျလညျး ဘာကွောငျ့ဆိုတဲ့ အခကျြတှကေို အရငျစဉျးစားကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ ကြောငျးဝငျခှငျ့ လြှောကျတယျဆိုရငျ ယောငျးက ဘာကွောငျ့ ဝငျခှငျ့ရသငျ့သလဲ ဒါမှမဟုတျ စကျောလာ (ပညာတျောသငျဆု) ကို ဘာကွောငျ့ ယောငျးကို ပေးသငျ့သလဲ စတဲ့ အခကျြတှကေို အရငျ တှကျခကျြပါ။
လြှောကျလှာက အမြားကွားမှာ ထငျးနစေဖေို့အတှကျ သူတို့တောငျးဆိုတဲ့ အရညျအခငျြးတှေ၊ လိုအပျတဲ့ အရညျအသှေး၊ ကြှမျးကငျြမှုတှေ ယောငျးမှာ ပွညျ့စုံနပွေီလား။ ပွောမယျဆို သကျသပွေစရာ အဖွဈတှေ ရှိနပွေီလားပေါ့နျော.. ရှိခဲ့မယျဆိုရငျ ဒီအခကျြတှကေို လှလှပပ ထုတျသုံးပွပါ။ ဒီအခကျြတှကေို လြှောကျလှာထဲမှာ အံဝငျခှငျကြ ဖွဈအောငျ သုံးပွီး ကိုယျက ဒါတှနေဲ့ တကယျထိုကျတနျသူဖွဈတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေို ဖျောပွပါ။
Related Article >>> အလုပျလြှောကျလှာကို ထငျပျေါအောငျ ဘယျလို လုပျမလဲ?
၂။ ကိုယျ့ရဲ့ ခှနျအား၊ ကိုယျ့ရဲ့ အားသာခကျြတှကေို ထငျးလငျးနအေောငျ ပွပါ။
လြှောကျလှာစရေးဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီဆိုရငျ ကိုယျဘယျသူလဲဆိုတာ ဖျောပွဖို့ စဉျးစားရမယျ့ အခြိနျရောကျလာပါပွီ။ အစီအစဉျတဈခုခုအတှကျ လြှောကျလှာတငျတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတျ ပညာသငျဆုတှအေတှကျ လြှောကျလှာတငျတဲ့အခါမှာ လြှောကျလှာကို ဖတျရှုတဲ့သူတှကေ အကောငျးဆုံးနဲ့ အထူးခြှနျဆုံးတှကေို ရှေးခယျြကွညျ့တတျတဲ့အပွငျ အသငျ့တျောဆုံးကိုလညျး ရှာဖှကွေညျ့ရှုတတျကွပါသေးတယျ။ ဆိုတော့ ကိုယျ့ရဲ့ အားသာခကျြတှကေို ဥပမာအမြိုးမြိုးနဲ့ ပျေါလှငျအောငျ ဖျောပွပါ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ယောငျးက တီထှငျဖနျတီးနိုငျစှမျးရှိတဲ့သူတှကေို ရှာဖှမေယျ့ အစီအစဉျမှာ ပါဖို့ လြှောကျလှာတငျမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးကြောငျးတကျတုနျးက ထူးခွားဆနျးသဈတဲ့အရာတဈခုခုကို တီထှငျခဲ့ဖူးတာဖွဈဖွဈ၊ ပွုလုပျခဲ့ဖူးတာဖွဈဖွဈ ထညျ့သှငျးသငျ့တဲ့အပွငျ မကွာသေးခငျက အသဈအဆနျးတှကေို ရှာဖှရေငျး ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ပွဿနာတှရေဲ့ အဖွကေို ရှာတှခေဲ့တဲ့အကွောငျးလညျး ဖျောပွလို့ ရပါတယျ။
၃။ ကိုယျကိုယျတိုငျ စိစဈသူ အနအေထားမှာ နပွေီး စဉျးစားကွညျ့ပါ။
အကောငျးဆုံး လြှောကျလှာကို ရေးသားနိုငျဖို့အတှကျ ကိုယျရေးတဲ့ စာစီစာကုံးကို ဘယျလို အဓိပ်ပာယျဖှငျ့မလဲဆိုတာ အခြိနျခဏယူပွီး စဉျးစားပါ။ တကယျလို့မြား လြှောကျလှာက လှနျခဲ့တဲ့ အခြိနျတှတေုနျးက တဈခုခု ဖွဈခဲ့တဲ့အကွောငျးကို မေးထားတယျ ဆိုပါစို့.. ဒီမေးခှနျးကို ဖွဖေို့အတှကျ ဒီဖွဈရပျမှာ ယောငျးဘယျလို တုံ့ပွနျခဲ့တယျ၊ တှခေဲ့တဲ့ အခွအေနကေို ဘယျလို ရငျဆိုငျခဲ့တယျ၊ ယောငျးရဲ့ တုံ့ပွနျမှုကို ဘယျလို အဓိပ်ပာယျဖှငျ့မယျဆိုတာတှကေို စဉျးစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့မြား စိနျချေါမှုတဈခုကို ဘယျလို ကြျောလှားခဲ့လဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြိုးဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျတော့ အတနျးပွီးခြိနျမှာ ယောငျးကို အနိုငျကငျြ့တဲ့သူကို ကိုယျတိုငျ ဘယျလို တုံ့ပွနျခဲ့လဲဆိုတာမြိုး သှားဖွလေို့ မရပါဘူး။ ဒီဥပမာက စိနျချေါမှု တဈခုကို ယောငျးဘယျလို ကြျောလှားခဲ့တယျဆိုတာကို ပွနပေမေဲ့လညျး မေးမွနျးသူဘကျက ကွညျ့မယျဆိုရငျ ဒါဟာ ယောငျးရဲ့ ပွယုဂျတဈခုဖွဈပွီး ယောငျးဟာ ဆုံးဖွတျခကျြ အားနညျးတဲ့သူတဈယောကျ၊ အကွမျးဖကျခွငျးကို အားပေးတဲ့သူတဈယောကျလို့ ယူဆသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျရေးလိုကျတဲ့ စာစီစာကုံးတှကေတဈဆငျ့ ဒါမှမဟုတျ ဥပမာတှကေတဈဆငျ့ အဓိပ်ပာယျကောကျလှဲပွီး မကောငျးတဲ့အမွငျနဲ့ မွငျသှားနိုငျတာကို ကွိုစဉျးစားထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
၄။ အမှားအမှနျကို ပွနျစိစဈပါ။
လြှောကျလှာမတငျသေးခငျမှာ ယောငျးရဲ့ စာစီစာကုံးတဈခုလုံးကို သခြော ပွနျဖတျပွီး အမှားတှေ ပွငျပါ။ စဈတဲ့အခါလညျး မူရငျးမေးခှနျးကို ပွနျကွညျ့ဦးနျော.. ဒါ့အပွငျ ယောငျးရဲ့ အဖွတှေကေ လုံလောကျမှုရှိလားဆိုတာ ပွနျစဈပါဦး။ အကောငျးဆုံးကတော့ ယောငျးရေးထားတဲ့ စာစီစာကုံးကို သူငယျခငျြးတဈယောကျဖွဈစေ၊ ကိုယျ့ရဲ့ မိသားစုဝငျတဈယောကျဖွဈစေ၊ တဈယောကျယောကျကို ဖတျခိုငျးပွီး ယောငျးဖွထေားတာဟာ မူရငျးမေးခှနျးနဲ့ ကိုကျလား၊ မကိုကျလား ပွောခိုငျးကွညျ့ပါ။ ဆိုလိုတာက ဖတျရငျးနဲ့ မူရငျးမေးခှနျးနဲ့ဆိုငျတဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးလာခဲ့မယျဆိုရငျ ဒါဟာ ခေါငျးစဉျနဲ့ ကိုကျညီပါတယျ။ ဒီလိုတှေ စဈဆေးပွီးရငျတော့ သဒ်ဒါအထားသို၊ စာလုံးပေါငျး အမှားအမှနျ စသဖွငျ့ အမှားအယှငျးမရှိအောငျ ပွနျလညျ စိစဈပါ။ ဒီအတှကျ ပေးခငျြတဲ့ အကွံကတော့ ရေးထားတဲ့ စာစီစာကုံးကို ပုံနှိပျထုတျယူပွီး စာရှကျပျေါမှာ အမှားရှာတာက ကှနျပြူတာဖနျသားပွငျပျေါမှာ ရှာဖှတောထကျ ပိုပွီး လှယျကူပါတယျ။
Related Article >>> Fellowship ဘာလဲ၊ ဘယျလဲ?
နောကျဆုံးတဈခုကတော့ အလုပျထကျ အပွောက ပိုပွီးလှယျပါတယျ။ ဆိုလိုတာက ယောငျးလြှောကျမယျ့ အစီအစဉျ ဒါမှမဟုတျ ပညာသငျဆုအတှကျ ယောငျးရေးထားတဲ့ စာစီစာကုံးက ယောငျးအကွောငျး အစဈအမှနျဖွဈဖို့ အရေးပါပါတယျ။ လြှောကျလှာကို ဖတျမယျ့သူတှကေ ယောငျးရဲ့ ကိုယျပိုငျအနအေထားကို သိခငျြကွတာပါ။ ဒါမှပဲ ယောငျးရဲ့ လြှောကျထားခကျြနဲ့ ယောငျးနဲ့ ကိုကျညီမှု ရှိမရှိ ဆုံးဖွတျနိုငျမှာပေါ့.. ဆိုတော့ ယောငျးရဲ့ အကွောငျး၊ ယောငျးရဲ့ အားသာခကျြကို ပျေါလှငျအောငျ ဖျောပွပါ။ ဒါ့အပွငျ ယောငျးက ဘယျလို လူမြိုးဖွဈလဲဆိုတာကို ဖတျရှုစဈဆေးတဲ့သူတှေ သိအောငျ ဖျောပွရေးသားပါ။
Tagged Application, Apply, Career, craft, Create, Scholarship, Strength
Posted on August 28, 2017 Author Miko
ယောင်းတို့ရေ.. ရာသီခွင်အလိုက် အလုပ်ခွင်မှာထားတဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ အမူအကျင့် အရည်အသွေးတွေ ကွာဟနေတယ်ဆိုတာ သိကြပါသလား။ မသိသေးရင် ဖတ်ကြည့်နော်.. အက်ဒ်မင်အတွက်တော့ မှန်တယ်ရယ်..
Posted on October 30, 2017 Author Alex Aung
ကိုယ်ဝါသနာပါရာ၊ ပျော်ရွှင်ရာ အလုပ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက် (၅)ချက်
Posted on June 13, 2018 July 25, 2018 Author Ei Mon
ကိုယ်လုပ်ချင်တာနဲ့ တကယ်လုပ်နေတာနဲ့ ထပ်တူကျနေတဲ့ ယောင်းလေးတွေ လက်ညှိုးထောင်…
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်… (အပိုင်း – ၄)